Sidee in ay ku xidhmaan ah iPhone (iPhone 6 Plus mid), iPad in aad TV?
Ma leedahay iPhone ama iPad ah oo ka fekerayay waxa xidhiidhinaya set TV aad? Waxaad samayn kartaa si aad u fudud oo wuxuu ku raaxaysan bandhigay weyn ee video aad jeceshahay ama filim iyo xitaa ciyaarta in aad inta badan ka ciyaari aad iPhone ama iPad. Labada aaladaha ay ku xidhan karto TV set aad la caawiyo ee cable HDMI iyo adabtarada iyo sidoo kale wirelessly isticmaalaya Apple TV iyo AirPlay. Waxaad dooran kartaa mid ka mid ah laba hab oo sida ay laguugu sahlo, baahida loo qabo iyo miisaaniyadda.
Qeybta 1: Maxay tahay sababta aad ugu baahan tahay in ay ku xidhmaan iPhone, iPad in TV?
Qeybta 2: Sida loo Connect iPhone ama iPad in TV?
Hadda, su'aal baxdo in sababta aad ugu baahan tahay in ay ku xidhmaan iPhone iyo iPad shaashada TV. Ina keena aynu arki saddex xaaladood sharxaya sida loogu baahan yahay in lagu xiro labada qalabka si ay shaashadaha TV.
1. Si aad u daawato filimada shaashadda ka weyn
Movie A in aad qabto in aad iPhone ama iPad waxaa laga arki karaa shaashadda weyn ku xira hindiseen in TV, taas oo shaki kor u qaadi doontaa waayo-aragnimo ah. Haddii qof uu diyaar u yahay inuu arko video ah in uu heysto in uu iPhone / iPad shaashadda weyn sida TV ka dibna uu si fudud u xiran kartaa iPhone / iPad isticmaalaya nooc fudud siiyey qaybta soo socota.
2. Si aad u ciyaaro kulanka shaashadda ka weyn
qalabka macruufka caan ku yihiin taageero ciyaaraha, laakiin waayo aragnimo cajiib ah ka ciyaaro kulan weyn oo shaashadda waa wax xukun jecel ciyaaraha kasta mar walba isha. Haddii qof doonayo inuu ka faa'idaysto uu ciyaaraha xirfadda shaashadda weyn oo waayo-aragnimo dheeraad ah adventurous oo xiiso ka dibna uu ka iPhone ama iPad ciyaari kara kulankiisii ​​ugu cadcad ee shaashadaha TV by xira hindiseen.
3. In uu siiyo bandhigga dugsiyada iyo xafiisyada
Bandhigga waa mid ka mid ah hawlaha ugu muhiimsan ee xafiiska shaqada, dugsiyada iyo kulliyadaha. Haddii aad qabto iPhone ama iPad, waxaad si fudud u qaadi karto soo bandhigidda xafiiska oo kaliya xiriiriyaan macruufka qalab si shaashadda laga heli karaa oo halkaas waxaad ugu tagaan. Waxaad samayn kartaa isticmaalka qalab aad ee buuxda.
Hadda, si aan u ogaanno isticmaalka cajiib ah oo isku xira naga iPhone ama iPad in shaashadaha TV-ga, waa in aanu ku gartaan si loo sameeyo waxa ay ka shaqeeyaan. Tani waa halkii hawl fudud oo la samayn karaa dhawr daqiiqadood gudahood, la siiyaa in aad looga baahan yahay adabtarada iyo cable. Waxaannu u nimid inaannu la tilmaanta buuxda oo ku saabsan sida loo xidhi aad iPhone / iPad in set TV si aad u hesho bandhigay weyn ee in waxa ka ciyaaro ku saabsan qalabka screen macruufka.
Waxaad laba doorasho:
Marka hore, Connect iPhone, iPad in TV isticmaalaya adabtarada ah HDMI iyo cable
Labaad, Connect iPhone, iPad in TV wirelessly isticmaalaya Apple TV + AirPlay
Halkan waa tallaabo hagitaan talaabo talaabo labada doorasho.
Xulashada 1: Isku iPhone, iPad in TV Isticmaalka HDMI ah
Si xiro qalabka aad si TV, waxaad u baahan doontaa adabtarada HDMI ah si aad u iPhone ama iPad iyo cable HDMI ah. Adabtarada ayaa waxaad isticmaali halka xira qalabka Gaarna ku xiran tahay iPhone ama iPad version. Adaptors qalabka cusub iyo kuwii hore ka duwan yihiin laakiin habka ay u xirmaan waa isku mid.
In qalabka dhawaan macruufka, waxaad ka arki kartaa video ciyaaro ku saabsan qalabka iyo TV isku mar. Tan waxaa lagu magacaabaa mirroring. Halkan waxa ku jira tallaabooyin ay ku xirmaan,
Hubi nooca adabtarada qalab macruufka u baahan yahay inuu ku xirmaan TV. Hubso in aad leedahay adabtarada saxda ah. Waxaa Dooro sida ay model qalab macruufka ah. Dukaanka Apple Waxaad ka iibsan kartaa.
Hel adabtarada AV digital mid ku haboon sida ku cad image hoos ku qoran.
Geli adabtarada kaa gelin doonaa iPhone sida ku cad image.
Geli darafkiisan cable HDMI galay adabtarada ee dekedda HDMI. Tani dhammaadka xarigiisa uu leeyahay mid ka mid dekedda dheeraad ah oo ku amraya si inta aad qalab aad ku xirmaan oo wuxuu ku raaxaysan videos shaashada weyn, waxaad sidoo kale waxay qaadi karaan qalab aad.
Geli dhamaadka kale ee cable ee dekedda HDMI HDMI dambe ee set TV aad.
Qalab aad xiran yahay oo aad ka arki kartaa wax walba oo aad ka phone shaashadda TV aad sida ku cad image. Tan waxaa lagu magacaabaa mirroring. Hadda ciyaari video aad jeceshahay oo ay ku riyaaqaan shaashadda weyn.
War sow ma aha mid fudud oo ku filan in la siiyo isku day ah ??
Xulashada 2: Connect iPhone, iPad in TV wirelessly isticmaalaya Apple TV + AirPlay
Ku xiridda qalabka macruufka dhex cable HDMI ma aha fikrad xun, laakiin haddii aad rabto in aad waayo-aragnimo ah wireless dhamaystiran markaas Apple aad bixisaa interface la yaab leh, waayo, sida TV Apple. Haa !! Isticmaalka technology AirPlay ee TV Apple, aad ku xidhi kartaa iPhone ama iPad wirelessly aad wifi guriga.
Halkan waxaan la talaabooyin fudud u tagaan in ay ku xidhmaan iPhone / iPad wirelessly isticmaalaya Apple TV + AirPlay.
Hel TV Apple ah, qalab oo aad ku kici karaan $ 100 oo aad ula xidhiido aad TV.
Geli xira cable TV ee Apple dekedda HDMI ee dhabarka.
Geli cable ee dekedda HDMI ee danbe ee TV. Hel xoog ku saabsan.
In shabakad isku wi-fi Connect qalab macruufka sida TV Apple oo waxaad arki doontaa button cusub ee AirPlay shaashadda video ee qalabka macruufka ah. Guji ku yaal.
Hadda waxaad ka daawan kartaa jecel aad video airplaying shaashadda TV aad.
Oo si fiican u ciyaaro kulan aad ugu jeceshahay.
Waa sahlan weli la yaab leh.
Isticmaalka kuwaas oo laba hab oo aad ku raaxaysan karaan video, sawiro, filimada iyo kulan ka qalab macruufka ah ee shaashadaha TV aad. Isticmaalka adabtarada HDMI waa hab raqiis ah halka xira dhex TV Apple waa qaali, laakiin arrin sahlan, sababtoo ah wireless xiriir.
YouTube sida aad Video Personal iyo Music Source a
Shuruudaha Adobe jilitaankii System, sida loo sameeyo Computer u jilitaankii
> Resource > Video > Sida loo Connect ah iPhone (iPhone 6 Plus mid), iPad in Your TV?